トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Tombontsoa sy ny fatiantoka mba hanakarama ny mpanjifa bola vola
Ho toy ny toerana mba nindram-bola dia mbola misy koa ny fomba mampiasa ny mpanjifa noho ny banky ara-bola hafa. Na dia toy izany
CM dokam-barotra sy ny gazety an-tsaha, no nahitako ny anaran'ny orinasa, dia tokony koa ny olona maro izany.
Noho izany, moa ve ianao miara-izay zavatra no tombony sy ny fatiantoka ny nindram-bola ao amin'ny fitantanam-bola mpanjifa?
mpanjifa bola momba ny soa azo avy amin'ny fampiasana ny mpanjifa fitantanam-bola, na taloha fantatra amin'ny anarana hoe Sarah ny volamena, dia ny fahaiza-manao eo amin'ny zavakanto na ny antsoina hoe Machikin.
ankehitriny, na mpikambana ao amin'ny banky, ny ambony dia mora ampiasaina, ary mety mifanitsy amin'ny fampiharana ny Internet, dia maro ny olona ho toy ny azo antoka nahay ny zavakanto dia tsy nangataka nindrana.
2 ny iray amin'ireto manaraka ireto ny soa azo avy amin'ny fampiasana izany mpanjifa fitantanam-bola dia ho voatonona.
afaka hiatrika tampoka fandaniana hafainganam-pandeha caching
Ny voalohany ho voalaza dia ny toy ny soa entin'ny mpanjifa
Fitantanam-bola dia ny hafainganam-pandeha caching. Fohy indrindra avy
fampiharana, mba hahafahanao hamita ny fanadinana amin'ny 30 minitra ny 1 ora, ka mora kokoa ihany koa ny tsy ampy amin'ny raha misy zavatra maika.
Izao no lasa azo atao ny fahatongavan'ny milina unmanned bola. Na dia tsy misy tsena akaiky
, ny fisoratam ny fanadinana ianao mampiasa ny unmanned milina bola miorina manodidina ny tan?na.
eto, araka ny mameno ny antontan-taratasy ilaina, fa asaivo nanatanteraka ny fanadinana tamin'ny lefona an-telefaonina amin'ny olona tompon'andraikitra, tamin'izany andro izany ihany koa ny tsy mandray ny 30 minitra.
More vao haingana, koa tsy mitsaha-mitombo isa ny orinasa ny fisoratam ny nindrana avy marani-tsaina toy ny finday. Ihany no hanatanteraka ny fidiran'ny
daty sy ny toerana nahaterahany ny asa sy fidiram-bola, ny azo tanterahana handinika mora foana fampiharana ny soa. Antontan-taratasy izay takiana araka ny
fanadinana efa lasa, ankoatra ny fandefasana avy amin'ny milina unmanned fifanarahana, dia azo atao ihany koa ny hanao ny paika-taratasy.
mora-to-hahatakatra sy tsotra ny hamaly amin'ny fomba
Raha hisambotra ny vola amin'ny mpanjifa
bola, ilaina ny fanesorana guarantors sy niantoka ho toy ny fitsipika ankapobeny.
teo amboniny, ary ny sonia imbetsaka ao amin'ny maro ny fifanarahana, raha ampitahaina amin 'izany zavatra toy ny fandraisana ho mpikambana, ary ny toy izany dia tanterahina rehefa naka fotoana famerenana, dia fomba tsotra hevitra marina sy ny soa. Koa satria
fa io ihany no fomba tsotra, amin'ny fotoana nanam, manasongadina ihany koa azo notanterahina ny fanaovana fampiharana toy izany ho toy ny telefaonina na ny Internet. Raha
in izany, dia tsy misy manahy momba ny Barre ny fianakaviany sy ny namany.
ihany koa ny endri-javatra izay lasa fomba tsotra koa ny hamaly. Ankoatra ny fitsaboana amin'ny alalan'ny
varavarankely, dia mandoa avy amin'ny ATM ao amin'ny nikarakara fivarotana, dia afaka mandoa any amin'ny toeram-pivarotana sy ny Internet ATM banky tao anatin'ny taona vitsivitsy.
koa andavanandro noho ny an'ny mpiasa birao be atao, dia mahatsapa conveniently afaka hamaly, nefa tsy nanery ny fotoana.
zanabola ny hafainganam-pandeha fa tsy fomba mitombo
Aoka voalaza ho toy ny tombon-dahiny ambonin'ny hampiasa ny
mpanjifa bola, dia ny hahavony ny zanabola. Na dia tsy misy
niantoka sy ny antoka, izany dia efa napetraka amin'ny vola kokoa noho ny mahazatra, mba hampihenana ny famoriam-bola mety.
Ankoatra izany, ny mamatotra amin 'ny fitsipika mba hamaly amin'ny lehibe sy ny tombontsoa mifanitsy fifanekena, ny tamin'ny toe-javatra maro ny fotoana handoavana lasa intsony. Raha jerena ihany ny hamaly habetsaky ny
isam-bolana, 3000 sy 5000 Yen Yen sy ny kely 'ny filaminana, tsy vitsy ny olona fa be loatra ny fampiasana catapult.
, na izany aza, na dia tsy manana vola ampy ho ezaka vonjy taitra hamaly, amin'ny toe-javatra maro mba hamaly ny kely indrindra amin'ny vola isam-bolana ihany, Lasa endrika, toy ny karama ihany ny liana, koa nino izay mbola sisa tsy hampihena ny tale .
fahazoan-dalana noho izany ny tranga ho an'ny, mandray soa avy amin'ny zanabola 0 fampielezan-kevitra.
Izany no, ao ny an'ireo izay mindrana ny voalohany dia manana vokany tamin'ny volana voalohany, dia midika hoe zanabola ny drafitra ho tonga 0, dia somary drafitra fototra ao mpanjifa fitantanam-bola.
By miverina foana na dia ny habetsaky ny vola izay voalamina amin'ny lafiny sasany toy ny tsy azo vokany tamin'ny volana voalohany, tsy misy intsony na dia hamaly no loatra izany, dia ho afaka tsy ny mety ho fipoahan'ny ho ao an-honahona.
Soa azo avy amin'ny fampiasana
mpanjifa Fitantanam-bola dia afaka ho entina mivoaka ho hijery indray sy nindrana avy amin'ny fampiharana ao fohy ny fotoana ananany.
maka maromaro arivo Yen mandritra ny andro tena, dia azo lazaina fa anisan'ny tafavoaka velona ho any izany.
ny ankilany izay, fa ny zanabola avo dia nametraka ary, fa ny tena sarotra ho voatanisa vitsy tamin 'ny fotoana ny fandoavam-bola. Ny hoe aseho dia CM ny
mpanjifa bola, tat? aoriana, ka dia tsy ho maharary, aoka isika hiezaka ny hanao ny antonony tsy hamaly drafitra.
Ankoatra izany, soso-kevitra mba haharaka ny tsara raha tsy misy drafitra ho, avy amin'ny mpanjifa vola tsirairay ny tranonkala pejy, satria tsy hitranga.
Nakaniwa, dia mety ho tonga lafatra ny fomba hamaly hisafidy ny drafitra amin'ny taniny. Tsy
hiverina amim-pahendrena mba mindrana amim-pahendrena, mpanjifa ny vola raha azo atao izany ho antsika ho tonga mafy mpiray dina aminy any.
mifandray / tombontsoa sy ny fatiantoka ny mindrana vola any amin'ny banky